Home Wararka Beesha Caalamka oo markii u horeeysay wada aqoonsatay doorashada Axmad Madoobe
Beesha Caalamka oo markii u horeeysay wada aqoonsatay doorashada Axmad Madoobe
Madaxweyne Farmaajo ayaa in mudo ah ku mashquulsanaa sidii uu beesha Caalamka iyo wadamada dariska la ah sida dalka Kenya uga dhaadhicin lahaa in dib loogu noqdo doorashada Jubbaland ama lagu qasbo madaxweyne Axmad Maxamed Islam (Axmad Madoobe) uu iscasilo.
Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay MOL ayaa sheegaya in horaantii asbuucaan ay beesha caalamku isku waafaqday in si toos loo aqoonsado doorashadii lagu doortay Madaxweyne Axmad Madoobe. Safiirka dalka Ingriiska ee Qaramada Midoobay Dame Karen Elizabeth Pierce oo kulan gaar ah la qaadatay wakiilka Xogahaya Guud ee QM Mudane James Swan ayaa ku adkeeysay in ay qalad tahay in doorashada Axmad Madoobe wali su’aalo ka taagan yihiin, muhimna tahay in lala shaqeeyo.
Sidoo kale James Swan oo kulamo la qaatay dublamaasiyiin ku sugan Xarunta Qaramada Midoobay ayaa dhankiisa sheegay in uu dhowr mar ku soo hadal qaaday Madaxweyne Farmaajo in uu xal deg deg ah u helo muranka ka dhaxeeya dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowlada Fedaraalka laakiin uusan jawaabo lagu qanco ka helin. Hadalka ka soo yeeray James Swan ayaa u muuqda mid uu ku dhiirigalinayo beesha caalamka in ay si toos ah u aqoonsadaan Axmad Maddoobe ulana shaqeeyaan dowladiisa.
“anaga waa ay inoo cadahay in Axmad Madoobe yahay hogaamiyaha saxda ee Jubbaland, laakiin waxa aan in mudo ka ah ka sugaynay MW Farmaajo in uu soo afjaro qilaafka ku dhisan rabitaanka shaqsiga ah isla markaana uu u turo shacabka Soomaaliyeed” ayuu yiri James Swan oo la hadlayay qaarf kamda dublamaasiyiinta ku sugan Qaramada Midoobay.
Asbuuc ka hor ayaa ah ahayd markii MW Farmaajo kala hadlay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta in Doorasho cusub loo qabto Jubbaland ama Axmad lagu qasbo in uu iscasilo. Laakiin Uhuru Kenyatta ayaa u sheegay Farmaajo in uusan awoodin in Axmad Madoobe la ceyriyo ama lagu qasbo doorasho cusub.
“ Madaxweyne, shacabka Soomaalida ugu badan ee reer Kenya ah waxa ay ka soo jeedaan beesha Ogaden, kuwaas oo awood siyaasadeed ku leh dowladeeyda, sidaas darteedna marnaba kuma dhiiran karo in aan aniag qayb ka noqdo ceyrintiisa” ayuu yiri Uhuru Kenyatta.
Uhuru ayaa ku daray, “ madaxweyne waxa aan anigu awoodaa in aa kaala shaqeeyo in Axmad Madoobe uu kula shaqeeyo oo uu ku hoos yimaado sida ay madaxda dowlad goboleedyada )counties ay ii hoosyimaadaan”.
Dhanka kale Safiirka Ingiriiska oo booqasho ku tagay dowlad goboleedka Puntland mudo laga joogo asbuuc ayaa ku soo qanciyay Madaxweyne Saciid Dani in uu door ka ciyaaro isku soo dhaweynta Axmad Madoobe iyo Farmaajo si xal loogu helo qilaafka siyaasadeed ee salka ku hayo naceyb qabiil iyo mid shaqsiyadeed.
Saciid Dani ayaa lagu wadaa in uu maalinta talaada safar uu ku tago magalaada Muqdishu kaas oo uu kula kulmi doono qaar ka mida beesha caalamka inta uusan la kulmo Farmaajo.
Waxaa muuqato in uu ugu danbeeyntii Farmaajo ay ka soo xirmayn dhamaan qorshayashii iyo isku daygii uu doonayay in uu ku ceyriyo Madaxweyne Axmad Madoobe, waxaana u cadaatay in Axmad Madoobe sii ahaan doono madaxweyne taas oo ay macquul tahay in Axmad Madoobe sii ahaado madaxweyne marka Soomalida doortaan madaxweyne cusub bisha Febaraayo ee sanadka 2021.
Axmad Madoobe ayaa la filayaa in uu safro dalka Kenya halkaas oo uu kula soo kulmi doono dublamaasiyiin ajnabi ah iyo hogaanka sare ee dalka Kenya.
Dhanka kale Madaxweynayaashii hore Shiikh Sharif iyo Xasan Shiikh ayaa dhankooda u sheegay Farmaajo markii ay la kulmeen maalintii Arbacada, in ay diyaar u yihiin in ay dhex-dhexaadiyaan labada dhinac.